Wadamadee ayaa joojiyay isticmaalka AstraZeneca’s tallaalka COVID? - Wardeeq 24 TV Wadamadee ayaa joojiyay isticmaalka AstraZeneca’s tallaalka COVID? Wardeeq 24 TV
Home Caafimaad-ka Wadamadee ayaa joojiyay isticmaalka AstraZeneca’s tallaalka COVID?
Wadamadee ayaa joojiyay isticmaalka AstraZeneca’s tallaalka COVID?
In ka badan toban dal, inta badan Yurub, ayaa joojiyey isticmaalka tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 cabsi laga qabo in tallaalka uu sabab u yahay qaatayaasha qaarkood inay yeeshaan xinjiro dhiig.
Iswiidhan iyo Latvia ayaa Talaadadii noqday waddammadii ugu dambeeyay ee joojiya soo-saarista, ka dib markii ay dhaqaaqeen Jarmalka, Talyaaniga, Faransiiska, Isbaanishka, Danmark, Norway, iyo Holland, iyo kuwo kale.
Ireland waxay si kumeelgaar ah u joojisay isticmaalka tallaalka AstraZeneca
WHO waxay taageertaa tallaalka AstraZeneca coronavirus waxayna hoos u dhigeysaa khataraha
Bulgaria tii ugu dambeysay ee joojiso tallaalka AstraZeneca; WHO ayaa sheegtay inaan loo baahnayn
AstraZeneca ayaa seegi doonta keenista tallaalka EU-da rubuc-labaad: Warbixin
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa kulmaya Talaadada si ay dib ugu eegaan xogta badbaadada ee laga heli karo tallaalka, in kasta oo ay si isdaba joog ah kalsooni ugu muujisay ammaankeeda maalmihii la soo dhaafay; Madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in ilaa iyo hada aysan jirin wax cadeyn ah oo ku saabsan xiriirkan.
In ka badan 17 milyan oo qof ayaa tallaalka ka helay Boqortooyada Ingiriiska iyo Midowga Yurub illaa maanta, iyada oo in ka yar 40 xaaladood oo xinjirowga dhiigga ah la soo sheegay illaa usbuucii la soo dhaafay, AstraZeneca, oo ah wadamo badan oo Ingiriis iyo Iswidhish ah ayaa sheegay Axaddii.
Hay’adda dawooyinka Yurub (EMA), jaangooyaha dawooyinka Yurub, ayaa la kulmi doona Khamiista si ay ugala hadlaan macluumaadka la ururiyey si loo go’aansado in tallaalku gacan ka geystey dhacdooyinka thromboembolic ee kuwa la tallaalay.
In kasta oo baaristeeda ay socoto, EMA weli waxay ku jirtaa aragtida ah in faa’iidooyinka tallaalka AstraZeneca ee ka hortagga COVID-19 ay ka culus yihiin halista waxyeellooyinka soo raaca
Laakiin xaqiijinta waxay umuuqataa inay sameysay wax yar si ay u qaboojiso shakiga. Kuwani waa waddamada joojiyey isticmaalka tallaalka illaa maanta:
Hay’ada caafimaadka Sweden ayaa 16-kii bishii Maarso hakisay isticmaalka tallaalka AstraZeneca oo ah tallaabo taxaddar ah.
“Wakaaladda Caafimaadka Dadweynaha ee Sweden ayaa go’aansatay in ay joojiso isticmaalka tallaalka AstraZeneca ee loo yaqaan ‘covid-19’ illaa iyo inta laga gaarayo baaritaanka wakaaladda dawooyinka ee Yurub ee ku saabsan waxyaabaha looga shakisan yahay dhibaatooyinka soo raaca,” ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay hay’adda.
Wakaaladda Caafimaadka ee Iswidhishka ayaa sheegtay maalin ka hor in ay diiwaangelisay 10 xaaladood oo xinjiro dhiig ah iyo hal kiis oo heerar hooseeya oo ah dhiig-xinjiro dhiig ah oo ka dhex jira dadka qaatay tallaalka AstraZeneca, laakiin isugeyn maahan.
“Go’aanka waxaa la qaatay… in la joojiyo isticmaalka tallaalka AstraZeneca taxaddar ahaan, waxaan rajeyneynaa inaan si dhakhso leh dib ugu bilaabi karno haddii xukunka EMA uu oggolaado,” Macron ayaa ku sheegay shir jaraa’id.
Macron ma uusan faah faahin sababaha go’aanka laakiin wuxuu sheegay inuu rajeynayo in France ay awoodi doonto inay mar kale ku talaasho cirbadaha AstraZeneca “mar dhow”.
Dowladda Jarmalka ayaa 15-kii Maarso sheegtay inay joojisay adeegsiga toogashada AstraZeneca.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in go’aanka loo qaatay si “taxaddar ah” iyo talobixinta xakameynta tallaalka qaranka ee Jarmalka, Machadka Paul Ehrlich, oo codsaday in baaritaan dheeri ah lagu sameeyo kiisaska.
Hay’adda dawooyinka ee Talyaaniga 15-kii Maarso waxay sheegtay inay ku biirtay quruumaha kale ee Yurub ee ka hortagaya isticmaalka tallaalka AstraZeneca.
Tallaabadan ayaa timid maalmo uun ka dib markii Taliska Taliska AIFA ee Talyaanigu mamnuucay adeegsiga hal dufcadood oo tallaalka ah ka-hortag ahaan halka uu ku adkaystay in aanu jirin xiriir la aasaasay oo la xiriira dhibaatooyinka soo raaca.
Spain ayaa ku dhawaaqday 15-kii Maarso inay joojineyso isticmaalka tallaalka AstraZeneca ugu yaraan laba toddobaad si loogu oggolaado khubarada inay dib u eegaan amnigiisa.
“Waxaan go’aansanay inaan si ku-meelgaar ah u joojino [adeegsiga tallaalka AstraZeneca] taxaddar ahaan,” ayuu yiri wasiirka caafimaadka Carolina Darias oo wariyeyaasha la hadashay.
Luxembourg bishii Maarso 15 waxay sheegtay inay joojineyso isticmaalka tallaalka AstraZeneca oo ah “tallaabo taxaddar leh” illaa laga helayo warbixinta EMA ee tallaalka.
Qubrus waxay u dhaqaaqday inay joojiso isticmaalka tallaalada AstraZeneca COVID-19 bishii Maarso 15 iyadoo laga sugayo dib u eegista EMA ee tallaalka.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in hakintaasi ay socon doonto illaa iyo 18-ka Maarso, markaasoo EMA ay soo saari doonto dib u eegis lagu sameynayo tallaalka ka dib warbixinno ku saabsan dhiig-baxa dhiigga ku dhaca ee qaata qaar ka mid ah dadka qaata Yurub.
Boortaqiiska ayaa si kumeelgaar ah u hakiyay adeegsiga toogashada AstraZeneca 15-kii Maarso kadib warbixinadii laxiriira waxyeelada halista ah.
Madaxa hay’adda caafimaadka DGS, Graca Freitas ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay ku sheegay in inkasta oo dhibaatooyinka soo raaca ay “aad u daran yihiin”, ay yihiin “kuwo aad u dhif ah”, isagoo intaa ku daray in kiisaska noocaas ah aan weli laga soo sheegin Portugal.
Slovenia waxay ku dhawaaqday 15-kii Maarso inay ku biirayaan quruumaha kale ee Yurub joojinta isticmaalka tallaalka AstraZeneca.
Wasiirka caafimaadka ee Indonesia ayaa sheegay 15-ka Maarso in dalku dib u dhigi doono maamulka AstraZeneca ee COVID-19.
“Si aan u noqono muxaafid, hay’adda cuntada iyo daroogada ayaa daahisay hirgelinta AstraZeneca [tallaalka] maadaama ay sugeyso xaqiijinta WHO,” ayuu yiri Budi Gunadi Sadikin.
Indonesia ayaa heshay 1.1 milyan oo qiyaaso ah oo ah tallaalka AstraZeneca iyada oo loo marayo barnaamijka wadaagista tallaalka caalamiga ah ee COVAX bishaan waxaana lagu wadaa in ay hesho 10 milyan oo dheeraad ah labada bilood ee soo socota.
Nederland waxay aragtay 10 xaaladood oo xusid mudan oo waxyeelo xun leh, Hay’ad ilaalisa dawada Nederland ayaa tiri 15-kii Maarso, saacado kadib markii dowlada joojisay talaalka.
Ireland ayaa ku dhawaaqday 14-kii Maarso inay joojisay AstraZeneca “taxaddar fara badan darteed” ka dib markii ay soo baxeen warbixinno ka yimid Norway oo sheegaya in xinjirowga dhiigga ee halista ah ay ku jiraan qaar ka mid ah dadka qaata halkaas.
“Waxba ma noqon karaan, waxaa laga yaabaa inaan si xad dhaaf ah u jawaab celinno waxaanan si daacad ah u rajeynayaa in toddobaad gudihiis in nalagu soo oogi doono inaan taxaddar badan leenahay,” ayuu yiri Ku Xigeenka Madaxa Caafimaadka Ronan Glynn.
Previous articleMADAXWAYNAHA SOMALIA MAXAMED CABDILAAHI FARMAAJO OO QAATAY TALAALKA COVID_19.
Next articleDabkii Xuutiyiinta ayaa sababay dabkii Yemen ee ku dhintay muhaajiriinta Sanca: HRW